Kula mawa nakulezi zintaba ngumlando wakwethu - Bayede News
Izintaba, imigede, imifula namawa lapha ezwenikazi i-Afrika kunamagama yize amaqola azama ukugwamanda
Kukhona ukuvumelana ngokuthi izwe nezwe linezinto zalo elehluke ngazo. Lokhu kuyaba wulimi olusetshenziswayo, kube yizevatho, wukudla kanjalo nomlando wamagama nezindawo. Kwabanye baze bafake ngisho nohlobo lwemvelo etholakala kulelo lizwe kusuka ezitshalweni nasezilwaneni zasendle. Lapha nje e-Afrika saziwa ngokuba nalo lonke uhlobo lwezilwane abanye kwenzinye izingxenye zomhlaba kabapheli e-Afrika bethi bazobona lobu buhle abakubiza nge‘Eden’.
Khona kuleli zwekazi kukhona amawa nemigede okunemilando. Yebo lapha e-Afrika izintaba, amawa nemigede ngisho nemifula kunamagama. Isimanga lapha wukuthi kwala ngisho abasigqilaza bezama ukuqhamuka namagama abo kepha lokhu akwenzanga aboHlanga baqhubeke nokuwabiza ngalawo abakhula okhokho babo bezibiza ngawo lezi zindawo. Isibonelo nje sezinto ezimile neziluphawu lwe-Afrika nansi intabakazi iKilimanjaro eqwalwa minyaka yonke ngabantu abavela emagunjini amane omhlaba.
Intaba iKilimanjaro intabamlilo ethithibele eseTanzania. Inezidundu zobindi ezintathu okuyiKibo, iMawenzi neShira. Yintaba ende kunazo zonke e-Afrika nende kunazo zonke emhlabeni ezimele ephakeme ngamamitha ayizi-5,895 ngaphezu kolwandle kanti yona kusuka phansi kuya phezulu ingamamitha ayizi-4,900.
Nayi imibhoshongo e-Egypt efihle aMakhosi oHlanga sebazama abantu ukukhuluma izinganekwane bethi nangakubo zazikhona kepha lutho ubufakazi le mibhoshongo equkethe umlando ilapha e-Afrika njengefagugu nengcebo yezizukulwane. Nazi nezintaba zoKhahlamba ezingagcini nje ngokuthatha amehlo kepha zinemidwebo yaBathwa ewumlando omqoka.
Kunobufakazi bokuthi kakuthunjwanga kwagqilazwa nje thina siqu kepha nengcebo ewumlando wethu yathathwa ngamasela ngaleso sikhathi. Ephawula ngokwebiwa kwengcebo elifagugu e-Afrika ngabahlaseli umbhali uMnu uMfuniselwa Bhengu uthi: “Intshonalanga ayigcinanga ngokucindezela aboHlanga base-Afrika kodwa yaqhubeka yantshontsha izinto eziningi ezazingamagugu abo. Isibonelo wumbiko obhalwe ephephabhukwini iThe Ancient History elashicilelwa zinhlanu kuMbasa ngowezi-2018, olotshwe ngu-Alicia McDemott lapho eveza khona izinto ezingamagugu ase-Ethiopia ezantshontshwa ngowe-1838 ngenkathi umkhuzi wempi wamasosha aseBritain uSir Robert Napier egasela kungalindelwe endaweni yaseMaqdala e-Ethiopia ekhashwa amasosha ayizi-13 000.”
Uyaqhubeka uMepho athi: “Phakathi kwezinto ezantshontshwayo kwaba umqhele wesintu owawugqokwa iZingonyama zaseNdlunkulu kuphela, umgexo wesintu owawakhiwe ngegolide waseBukhosini base-Ethiopia nengubo kanokusho yomdabu eyayigqokwa oNdlunkulu base-Ethiopia, kanye nendebe yewayini eyigolide eyayakhiwe nguWalda Giyorgis owayedume ngokwakha izinto eziningi ezazingamagugu aseNdlunkulu yase-Ethiopia. Okunye kwaba yimali eyayibalelwa ezigidini. I-Ethiopia kuze kube yimanje iyancenga kuVictoria and Albert Museum eLondon ukuthi mabazibuyise lezi zinto ezingamagugu. Isicelo sayo kuze kube yimanje asikavunywa.”
Ngisho kunjalo amasela nababhali basentshonalanga kabamile ukuzama ukugwamanda umlando waboHlanga ngokubhala amawuwa nentimbothi ngezindawo nokuqambeka kwazo. Le mizamo ihlale ibhuntsha ngoba ubufakazi buyabaphika.
Omunye ungoti kwezase-Afrika naye ongumbhali welaboHlanga, uMnu uSenzo Ngubane embhalweni wakhe owashicilelwa ngelaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: “Ubuchule okwahlanganiswa ngabo izwekazi i-Afrika”, uthi: ‘Uma ungakaze uzwe ngamachule abaseNyakatho ukwala ukuthi isakhiwo esibizwa ngeGreat Zimbabwe namuhla sasakhiwe ngabokudabuka e-Afrika, kuyobe awulwazi udaba. Uma ungakaze uhlangabezane nemibhalo ecasulayo yabacwaningi baphesheya abafana noGetrude Caton Thompson owavuma ukuthi iGreat Zimbabwe yakhiwa ngabangabokudabuka e-Afrika kepha wabahlambalaza ngokuthi athi noma kunjalo lesi sakhiwo sikhombisa ukuthi abakhi baso babengakhaliphile ngokwanele, kuyobe awulwazi udaba.
“Namuhla, kuyavunywa ukuthi iGreat Zimbabwe iwuphawu olukhombisa ukuthi leli zwekazi lalinezizwe ezaziholwa yilabo ababenobuhlakani futhi besebenzisa impucuko yabo. Uma ungakaze ufunde imibhalo kaHugh-Trevor Ropen, amaNgisi azigqajayo ngaye njengesinye sezifundiswa zawo ikakhulukazi kwezomlando, kuningi okusamele ukufunde ngemizamo yokudicilela phansi isithunzi saba se-Afrika.”
UNomafu komunye umbhalo wakhe ukhala ngokuthi enethunga isengela phansi nxa kufika kwezomlando wase-Afrika: “Emadolobheni amaningi ase-Europe anjengeBrussels, iBerlin, iLondon, iParis neRome kunezinguzanguza zezigcinamagugu eziqukethe nezikhangisa okungayisikompilo, ubuciko namagugu kwabangabokudabuka e-Afrika. La madolobha nalabo abasebenza kulezi zigcinamagugu, baze bazigqaje futhi bancintisane bebodwa ngokuthi ubani oqukethe ulwazi namagugu amaningi kunabanye ngelase-Afrika. Abaneso elibukhali bese beyazibuza ukuthi kudalwa yini ukuthi kube khona okungamagugu ase-Afrika okugcwele kwamanye amazwe kepha la kwelakithi akwaziwa.
“Okuphinde kuxake ukuthi maningi amazwe e-Afrika lapho izigcinamagugu ziswele ulwazi ngempucuko, imikhuba yasemandulo, amasiko ethu nokunye okuqinisekisa umlando ojulile ngama-Afrika. Leli gebe lokwentuleka kolwazi e-Afrika ngokwase-Afrika kuza nemibuzo ethize eminye yayo ithi: kungani kumele kube yizigcinamagugu ezikula mazwe ezigodle okungamagugu ase-Afrika? Kulezi zigcinamagugu kugcwele ulwazi olukhombisa impucuko, ubuhlakani nezigameko zangaphambilini zezifundazwe noBukhosi bamazwe asemandulo anjengeBenin, iDahomey, i-Asante, iMali, iZimbabwe namanye.”